Special Vote case to be heard Friday – Nehanda Radio
By Nehanda Radio	 On Jul 24, 2013 155
Chief Justice Godfrey Chidyausiku officially opens the 2013 legal year at the High Court in Harare. Looking on (from left) are Justices Charles Hungwe, Samuel Kudya and Hlekani Mwayera
Chief Justice Godfrey Chidyausiku on Wednesday ruled that the matter was urgent.
Last week thousands of security forces and civil servants failed to vote amid claims Zanu PF activists were given fake I.D’s to vote on their behalf.
Chidyausiku also confirmed urgency in another matter in which the Zimbabwe Union of Journalists wants its members to be granted an opportunity to cast their ballot earlier than July 31 before they are deployed to cover elections in various provinces throughout the country.
Jan 19, 2022 20,996
ZUJ lawyer Mr Rodgers Matsikidze of Matsikidze and Mucheche is seeking an order compelling ZEC to allow journalists, who will be out in different provinces covering elections, to be treated the same way with the uniformed forces and ZEC officials who are entitled to special voting.
Chief registrar of the Constitutional Court Mr Walter Chikwana confirmed the decision of the chief justice saying both matters will be treated urgently.
Godfrey ChidyausikuRodgers MatsikidzeZimbabwe Electoral Commissionzimbabwe special voteZimbabwe Union of Journalists
Sulumani Chimbetu Jingle for Nehanda TV
Jan 21, 2022 22,803
Jan 21, 2022 49,701
Jan 20, 2022 59,984
Jan 20, 2022 36,567